Burmese taste - Iora: ပေါင်မုန့် ဘေးသားတွေလွှတ်မပစ်တော့ဘူး။
Posted by Iora at 3:11 AM
Nyi Linn Thit August 19, 2012 at 4:29 AM
ဘေးသားကို အကြွေးမထားဘဲ တင်ပေးလိုက်ပြီပေါ့လေ...၊း)
ဒီမှာတော့ ပေါင်မုန့် ဘေးသားကော၊ အလယ်သားကော မစားဖြစ်တော့လို့ မာသွားရင် ကမ်းစပ်သွားပြီး ဘဲတွေ၊ ငန်းတွေ၊ စင်ရော်တွေ သွားကျွေးလိုက်တာ များတယ်ဗျ၊း) နောက်တစ်ခါတော့ ကိုယ်ဟာကိုယ်ပဲ လုပ်စားတော့မယ်၊
ဝက်သားခြောက်က တကယ့်ကိုစားချင်စရာ..၊ ကျနော် မပြောနဲ့..သီပေါမင်းတောင် မြင်ရင် သွားရည်ကျအုံးမှာ မြင်ယောင်တယ် မအိုင်အိုရာရေ...။းD
mstint August 19, 2012 at 5:36 AM
တီတင့်လည်း သားတွေငယ်စဉ်က ပေါင်မုန့်ဘေးသားကို ပူတင်းဖုတ်ကျွေးလေ့ရှိတယ်။ အခုတော့ သားတွေက ဖွယ်ဖွယ်ရာရာလုပ်ကျွေးဘို့ တောင်းဆိုကြတယ် အိုင်အိုရာရေး) ဆလပ်ရွက်သုပ်ကိုဘယ်လို လုပ်လုပ် မိုင်းယိုးနက်စ်ပါရင် ကြိုက်တယ်။ နည်းကောင်းလေးတွေ ဖတ်မှတ်သွားတယ် လုပ်စားအုံးမယ် ကျေးဇူးနော်။
သက်ဝေ August 19, 2012 at 8:40 AM
Bread Pudding လေးလိုပဲပေါ့... မိုက်တယ်... လုပ်ကြည့်အုံးမယ်...း)))
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) August 19, 2012 at 9:39 AM
ပေါင်မုန့် အနားသားလေးတွေကလည်း အသုံးဝင်သားနော်
ချိစ်များများထည့်ပြီး ဖုတ်စားချင်တယ်း))
အိုင်အိုရာရဲ့ ဆလတ်လေးလည်း ကြိုက်တယ် ချစ်စရာလေး...
မီးမီးငယ် August 19, 2012 at 12:50 PM
မုန့် ဆိုဘာမုန့် မှဖုတ်တတ်ဘူး..။
ပေါင်မုန့် တော့အမျိုးသားကကြိုက်လို့ ဝယ်လေ့ရှိတယ်။
ဘေးသားတွေကိုကျမကဟင်းအနှစ်တွေနဲ့ တို့ စားလေ့ရှိတယ်။
Iora August 19, 2012 at 7:27 PM
ဒီလောက်မြှောက်တော့လည်းခေါင်မိုးတွေဘာတွေပေါက်ကုန်မှာစိုးရတယ် မြောက်ပြီးတော့လေ။း)
သီပေါမင်းကပွဲတော်တည်ပြီးတာနဲ့ တောင်စွယ်မှာနေကွယ်တာနဲ့ ဒင်းကိုရှင်းပစ်ဆုိုသေရော။
အကြွေးတွေများနေလို့ ဖြည်းဖြည်းချင်းဆပ်ရတာလေ။ အဟဲ။
သားတွေကကြီးလာပြီဆုိုတော့ငယ်ငယ်ကလိုညာကြွေးလို့ မရတော့ဘူးနော်။း) မာမီတင့်လက်စွမ်းပြမှရတော့မှာ။း)))
ဟုတ်ပါတယ်။ မလေတော့ဘူးပေါ့နော။း)
ကိုယ့်အိမ်ဦးနတ်ကပေါင်မုန့် တစ်အားကြိုက်တယ်။ ခဏခဏ၀ယ်တော့ဘေးသားတွေကခဏခဏကျန်တယ်လေ။ ဒီလိုလေးဆုိုရင်တော့ကုိုယ်ကစားချင်တယ်။ ချိစ်ကြိုက်တော့လေ။ ဒါပေါ့ချိစ်များများနဲ့ ဆုိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ချောရ။ သူ့ ချည့်ဆုိုရင်တော့ဝေါင်ဝေါင်ရှေးဘဲ။ တုို့ တောင်မတုို့ ဘူး။ ထောပတ်လေးသုတ်ပြီးခြောက်ပြီးကြွတ်နေအောင်အာဗင်ထဲမှာဖုတ်လိုက်ရင်လည်း မုန့် ကြွတ်လိုမျိုးအရသာရဘူးတယ်။ ကုိုယ်ကမုန့် ကြွတ်မကြိုက်တော့ဆက်မစမ်းသပ်တော့ဘူးလေ။
ကိုယ်လည်းဟုိုလုပ်ဒီလုပ်လုပ်လို့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနေလေးတွေရတာကိုပြန်ပြန်လုပ်စားဖြစ်တာပါ။ ဒါကလည်းမုန့် ဖုတ်တယ်မခေါ်နုိုင်ပါဘူး အမှုိုက်ရှင်းနည်းတစ်မျိုးလို့ ဘဲယူဆနုိုင်ရုံပါ။း)
သိတဲ့အတုိုင်းမြန်ကောင်းသက်သာဆုိုရင်တော့ခဏခဏလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့လက်ဝင်တာဆိုတော်တော် mood ပါမှလုပ်ဖြစ်တာ။ မုန့် ဖုတ်တာပျော်စရာကောင်းပေမဲ့လုပ်ပြီးဆေးရကြောရသိမ်းရတာတွေကတော့ပျင်းစရာ။ Evy လိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ လှတပတလေးတွေဖုတ်တတ်ရင်သိပ်ကောင်းမှာလို့ တွေးနေတာ။
အဲလိုဟင်းအနှစ်နဲ့ တုို့ စားလိုက်တော့ပိုတောင်သက်သာအသုံးဝင်သေးတယ်မီးမီးရယ်နော်။း)
အဲဒီဝက်ဆုိုဒ်သွားကြည့်လိုက်သေးတယ်။ ဒါမပြန်ခင်။ အားမှထပ်သွားလိုက်အုန်းမယ်။ ကျေးဇူးနော်။
Aunty Oo August 19, 2012 at 9:29 PM
Iora August 20, 2012 at 8:21 AM
ကျန်ပါတယ် မကျန်လည်းဘေးသားတစ်ထုတ်ရှိသေးတယ်။ ထပ်လုပ်လို့ ရပါတယ်။း)အုိုင်အုိုရာလည်းချိစ်သိပ်ကြိုက်တယ်။ Mayonnaise ကတော့ကြိုက်လှတယ်မဟုတ်ဘူးရယ် ချစ်ချစ်ကအသီးအရွက်သိပ်မကြိုက်ပေမဲ့ အန်တီဦးတုို့ တီတင့်တုို့ အဖွဲ့ ဝင်ဘဲ။ Mayonnaise နဲ့ သုတ်ပေးတဲ့ဆလတ်တွေဆိုကြိုက်ပြီးများများစားတယ်လေ။း)
Sweety Snow August 20, 2012 at 11:49 PM
ကြိုက်တယ်အစ်မ လွယ်လဲလွယ်တယ်နော်.. မနက်စာစားနေတုန်းလာဖတ်ဖြစ်လို့ တော်သေးတယ်.. မဟုတ်ရင် ဂလုဂလုနဲ့ ဖြစ်နေမှာ :D
မွန်မွန်ယိုကို August 22, 2012 at 2:02 AM
ဗာစို တဲ. ဗုိုလ်စာလေးတွေလုပ်စားဖြစ်ရင် မမအိုင်အုိုရာရဲ. ပေါင်မုန်.ချိစ်ကပ်မုန်.လေးကို သတိရနေမယ်။ချိစ်များများနဲ.ဖုတ်တာဆုို သိပ်ကောင်းမှာနော်။ပေါင်မုန်.ဘေးသားကိုပူတင်းလုပ်စားဖြစ်တာများတာ။
ဝက်သားခြောက်နဲ. ဆလပ်သုပ်ကို ဒီပို.စ်မှာ အကြိုက်ဆုံး။ :)
ဟုတ်တယ် လွယ်လွယ်လေးရယ်။ အဆင်ပြေတဲ့ခါလုပ်စားကြည့်လေ။ တကယ်လွယ်မှန်းသိလိမ့်မယ်။ ထောပတ်သုတ်တာကတောင်သပ်သပ်ယပ်ယပ်သုတ်နေရသေးတယ်။ ဒါကဟုိုဖဲ့ဒီဖဲ့နဲ့ ဖုတ်လိုက်ရုံဘဲ။း)
သေချာတာပေါ့။ ချိစ်ကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့များလေကြိုက်လေပေါ့နော။း)
၀က်သားခြောက်ထပ်လုပ်အုန်းမယ်။ စားလို့ ကောင်းလို့ ။ ဆလတ်နဲ့ တွဲစားလုို့ လည်းကောင်းတယ်လေ။
Mar Mar Lwin August 25, 2012 at 4:58 PM
အိုင်အိုရာဖျော်ထားတဲ့ကော်ဖီခွက်ကြီးကိုင်ပြီး blog တစ်ခုလုံးကအစားတွကိုစားသွားတယ်နော်
san htun August 26, 2012 at 8:24 AM
မမအိုင်အိုရာတို့ များ တော်ချက်..မစားချင်လို့လွှင့်ပစ်ရတဲ့ ပေါင်မုန့် ဘေးသားတောင် စားချင့်စဖွယ်ဖြစ်တယ်..မြန်မာနဲ့ ဘိုစတိုင် ရောသမထားတဲ့ အရွက်သုပ်လေးတော့ စားကြည့်ချင်သား..လာမယ် ကြာမယ်ဆိုတဲ့ ပို့ စ်လေးတွေ မျှော်နေပါတယ် ခင်ဗျား...
ချဉ်ပေါင်တွေရလို့ သတိရနေတာ။ မျှော်နေမယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကြာလှချည်လားဆုိုပြီးတော့တော့အချဉ်မပေါက်နဲ့ နော်။ အဟက်..
Su August 28, 2012 at 3:16 AM
ပေါင်မုန့်ဘေးသားတွေတောင် စားချင်စရာကောင်းအောင်လုပ်တတ်တယ် မရေတော်လိုက်တာ ကော်ဖီခွက်ကြီးလဲ သရေကျတယ် :D
Iora August 28, 2012 at 4:18 PM
မန့် ထားတာလေးစပန်မ် ထဲရောက်နေလို့ ခုမှတွေ့ တာ။း) ဆောရီးနော်။
ကော်ဖီခွက်ကြီးနဲ့ ဆုိုတော့မငိုက်တော့ဘူးလေစုရေ။ နော။
Thanksalot dear.I often go to the lake and feed the ducks.Sometimes i bake them pudding.My sons enjoy it.I like salad too.We've same taste,you know.
Iora August 31, 2012 at 2:38 PM
KNLT also did like that and actually it is much nicer than baking and eating ourselves. Naw. :D
It is quite sure that we have the same taste, which is amazing.